Shil gaari oo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shil gaari oo geystay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Illaa 2 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay, 1 qof kalena wuu ku dhaawacmay kadib markii ay maanta isku dhaceen labo gaari oo maraayay wadada 21-ka October ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu shilkaasi gaari ka dhacay oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in shilkaasi uu ahaa mid aad u culus, islamarkaana ay isku dhaceen labo gaari oo kala ahaa gaari xamuul ah iyo gaari yar oo noociisu yahay NOHA.
Labada qof ee shilkaasi ku geeriyootay ayaa la sheegayaa inay saarnaayeen gaariga yar, waxaana goobta uu shilka ka dhacay markii dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Wadada 21-ka October oo ah waddo aad u mashquul badan ayaa inta badan waxaaa isticmaala gaadiidka xamuulka ah ee ka yimaada ama u socda dekedda magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan loo ogoleyn inay isticmaalaan wadooyinka kale.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo shil ceynkaan oo kale ah ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaana inta badan waddooyinka ay shilalka ka dhacaan yihiin kuwa aad u mashquul badan islamarkaana ciriiri ah.